Baqolwe eyesitokofela eGoli | News24
Johannesburg - Amadoda amabili ase-Eldorado Park, aqolwe isamba esingu-R52 000, okuyimali yesitokofela, kusho amaphoyisa esifundazweni saseGauteng.
Amadoda akhonjwe ngezibhamu adunwa imoto aphucwa nemali.
Funda nalolu daba: USedayisa izinkuni owaqolwa u-R45m
Isehlakalo senzeka ngesikhathi eqeda ukukhipha imali eSouthgate, kusho okhulumela amaphoyisa uWarrant Officer Kay Makhubela.
Izigilamkhuba zigcine zibaleka ngemoto eyiFord Fiesta, akulimalanga muntu kulesi sehlakalo.
Amaphoyisa asathungatha abasolwa.